Muxuu ka dhiggan yahay heshiiskii muhiimka ee ka dhacay VILLA SOMALIA? - Caasimada Online
Home Warar Muxuu ka dhiggan yahay heshiiskii muhiimka ee ka dhacay VILLA SOMALIA?
Muxuu ka dhiggan yahay heshiiskii muhiimka ee ka dhacay VILLA SOMALIA?
Is-afgaradkii jimcihii ay Villa Somalia ka shaqeysay, una dhaxeeyey dhinacyada Galmudug, waa arrin la soo wada dhoweeyay, laakin waxaa jirto cabsi laga qabo sida Ahlu-sunna ula dhaqmi-doonto hirgelinta arrimaha la isku afgartay, taasi oo sheekada ku celin karta meel “Eber ah”.
Xildhibaanno ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug waxaa ay qabaan in Ahlu-sunna aaney u hoggaansami-doonin heshiiska lagu saxiixay Djibouti, taasina ay waxba kama jiraan ka dhigi-doonto is-afgaradkii madaxweyne Xaaf, ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyaha baarlamaanka.
Xildhibaan Liibaan Cabdullahi Sheekh Xasan waxaa uu sheegay in arrinta dhacday ay aheyd is-afgarad iyo dib u sixid lagu sameeyay heshiiskii Dibouti.
Dhinaca kale Xildhibaan Garaad Yusuf Maxamud waxaa uu qabaa in arrinta dhacday ay tahay in madaxweyne Xaaf uu ku galay si deg deg ah, oo Ahlu-sunna aaney u hoggaansami doonin 14kii qodob ee Djibouti.